Netflix dia mandinika ny fahafaha-manolotra famandrihana lalao mitovy amin'ny Apple Arcade | Avy amin'ny mac aho
Ignatius Room | | Apple TV, tsaho
Ity Apple Arcade ity dia tsy mahita ny fahombiazana izay nantenain'ireo tovolahy Cupertino, tsy zava-baovao izany ary mahita ohatra iray hafa amin'ny fampiroboroboana izay ataony any Etazonia amin'ny alàlan'ny mpandraharaha Verizon, manome iray taona ny fidirana amin'ny sehatry ny lalao.
Ao amin'ny tsenan'ny lalao video, amin'izao fotoana izao misy safidy roa: ilay iray izay omen'i Apple lalao fotsiny tsy misy fifandraisana Internet na fidirana amin'ny alàlan'ny lohateny PC sy console amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fifandraisana Internet amin'ny fitaovana rehetra (Stadia, GeForce Now, Xbox Game Pass).
Na izany aza, ny tsaho farany mifandraika amin'ny sehatra video streaming Netflix dia manondro fa izany no izy liana amin'ny fanarahana ny lalana mitovy amin'i Apple, sehatra famandrihana lalao mitovy amin'ny Apple Arcade. Ny mpampiasa dia tsy maintsy mandoa famandrihana isam-bolana mba hiditra amin'ny katalaogin'ny lalao tsy voafetra.
Loharanom-baovao maro no milaza fa ny drafitr'i Netflix mbola maitso be izy ireo, noho izany dia azo inoana fa tsy misy idiran'ireto (raha raisintsika ny fahombiazana ananan'ny Apple Arcade, dia manondro daholo ny zava-drehetra).
Araka ny The Information, Netflix sNanangona ireo mpitantana indostrian'ny lalao video taloha tao amin'ny herinandro vitsivitsy izy miditra ao amin'ilay orinasa izy ireo.
Na dia efa niditra an-tsehatra tamin'ny lalao aza ny orinasa (…) dia mianatra ny mety hanamafisana ny fampiasam-bolany amin'ny sokajy io. Safidy iray nifanakalozan-kevitra momba ny orinasa ny fanomezana amboaram-bolo mitovy amin'ny fanolorana famandrihana an-tserasera an'ny Apple, Apple Arcade.
Ny mazava dia tsy maintsy atao ny Netflix hampifandanja ny orinasao. Azo zahana eran'izao tontolo izao izy io ankoatry ny firenena efatra izay tsy hahatrarany mihitsy: Sina sy firenena 3 hafa navoakan'ny governemanta amerikana.
Tsy manamafy na mandà ny vaovao i Netflix
Mazava ho azy fa tsy hanamafy ireo drafitra ireo i Netflix, indrindra raha toa ka ao anatin'ny dingana voalohany izy ireo. Na izany aza, tsy nandà azy ireo koa izy. Rehefa nanontanian'ny The Independent momba ireo tsaho ireo ny orinasa dia namaly fa "faly hiara-manao zavatra bebe kokoa amin'ny fialamboly ifandraisana." Raha hita ny fikasan'i Netflix farany, dia ho ela indrindra tamin'ny 2022 izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Netflix dia mianatra ny fahafaha-manolotra famandrihana lalao mitovy amin'ny Apple Arcade